ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတွင် လေဖိအားနည်းဆဲလ် INVEST 92B စတင်ဖြစ်ပေါ်
မေလ ၁၈ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ၁၂း၃ဝ နာရီတွင် ရရှိသည့် NRL data များအရ လပွတ္တာမြို့ အနောက်တောင်ဘက် မိုင် ၃ဝဝ ခန့်၊ ကိုကိုးကျွန်းလေဆိပ်၏ အနောက်-အနောက်တောင်ဘက် ၁၄၅ မိုင်ခန့်၊ ဖျာပုံမြို့ အနောက်တောင်ဘက် ၃၅၅ မိုင်ခန့်အကွာ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် တောင်ပိုင်းတွင် လေဖိအားနည်းဆဲလ် INVEST-92B စတင်၍ ဖြစ်ပေါ်လာကြောင်းတွေ့ရပါသည်။
GFS ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်၏ ကြိုတင်ခန့်မှန်းပုံဖေါ်ချက်အရ INVEST 92B သည် နောက်ဆုံးရ အချက်အလက်များရရှိချိန် မေလ ၁၉ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ၁၂း၃ဝ နာရီမှ နောက် ၂၁ နာရီ(မေလ ၂ဝ ရက် ဝ၉း၃ဝနာရီ)အထိ ပိုမိုအားကောင်းလာမည့် အခြေအနေမရှိသော်လည်း ဧရာဝတီတိုင်းကမ်းခြေဘက်သို့ (အရှေ့မြောက်ဘက်သို့) ရွေ့လျားနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ . . . → Read More: ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတွင် လေဖိအားနည်းဆဲလ် INVEST 92B စတင်ဖြစ်ပေါ်
Leaveacomment Uncategorized ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်း၌ ၁၂ နာရီမှ ၂၄ နာရီအတွင်း မုန်တိုင်း ဖြစ်လာမည်
By mmweather.ygn, on December 5th, 2013%
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အနောက်တောင်ပိုင်းမှ လေဖိအားနည်းဆဲလ် INVEST-92B သည် ပိုမိုအားကောင်းလာပြီး လာမည့် ၁၂ နာရီမှ ၂၄ နာရီအတွင်း 8.7N 84.1E TO 15.2N 83.5E မျဉ်း၏ ဘယ်ညာ ၁၄ဝ နော်တီကယ်မိုင်အတွင်း မုန်တိုင်းဖြစ်လာနိုင်ခြေ အဆင့် HIGH သို့ ရောက်လာပြီဖြစ်ကြောင်း JTWC မှ သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်။ (ပုံ)
နောက်ဆုံးရရှိသည့် အချက်အလက်များအရ INVEST 92B သည် အရှေ့မြောက်ဘက်သို့ တစ်နာရီ ၁၁ မိုင်နှုန်းခန့်ဖြင့် ရွေ့လျားခဲ့ပြီး ဗဟိုဖိအား 1000 hPA အထိကျဆင်းလာကာ ဗဟိုလေတိုက်နှုန်း ၃၀ နော်တီကယ်မိုင်နှုန်း(34.5 mph) အထိ ရှိလာကြောင်း တွေ့ရပါသည်။
. . . → Read More: ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်း၌ ၁၂ နာရီမှ ၂၄ နာရီအတွင်း မုန်တိုင်း ဖြစ်လာမည်
3 comments Uncategorized တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင်ထပ်မံ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် မုန်တိုင်း ကပ္ပလီပင်ပြင်အထိ ရောက်လာနိုင်ဘွယ်ရှိ
Leaveacomment Uncategorized အားပြန်လည်စုစည်း၍ လေဖိအားနည်းဆဲလ် ဖြစ်လာနိုင်မည့် 30W
စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း HAIYAN(31W) ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းအား ဖြတ်ကျော်ပြီး အနောက်ဘက်(တောင်တရုတ်ပင်လယ်သို့) ဝင်ရောက်လာချိန်တွင် – ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့၌ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းအဆင့်သို့ အားပျော့ပျက်ပြယ်သွားသည့် 30W သည် ပြန်လည်စုစည်းအားကောင်းလာပြီး လေဖိအားနည်းဆဲလ်(Low Pressure Cell – LPC)အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိကာ ယနေ့ နံနက်ဝ၉း၃ဝ နာရီမှ စတင်၍ မြိတ်နှင့်ဘုတ်ပြင်းမြို့များကြားမှ ကပ္ပလီပင်လယ်ဘက်သို့ ရွေ့လျားမည်ဟု GFS ကွန်ပျူတာမော်ဒယ် ခန့်မှန်းချက်များမှ ပြန်လည် ဖေါ်ပြလာပါသည်။
အဆိုပါ လေဖိအားနည်းဆဲလ်သည် နိုဝင်ဘာလ ၉ ရက် (စနေနေ့)နံနက်ပိုင်းတွင် ပိုမိုအားကောင်းလာနိုင်ပြီး – မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ကမ်းလွန် ပင်လယ်ပြင်(15.5º N / 96.5º E)တွင် ၁ မီတာမှ ၁.၂ မီတာ အမြင့်ရှိ လှိုင်းများဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကာ၊ လေပြင်းတိုက်ခတ်နှုန်း . . . → Read More: အားပြန်လည်စုစည်း၍ လေဖိအားနည်းဆဲလ် ဖြစ်လာနိုင်မည့် 30W
One comment Uncategorized ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အနောက်မြောက်ပိုင်းတွင် လေဖိအားနည်းဆဲလ် စတင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်
GFS ကွန်ပျူတာမော်ဒယ် ခန့်မှန်းချက်အရ အောက်တိုဘာလ ၂၈ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နေ့လည် ၁၂း၃ဝ နာရီခန့်မှ စတင်၍ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အနောက်မြောက်ပိုင်းတွင် လေဖိအားနည်းဆဲလ်တစ်ခု စတင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီး အရှေ့ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ (ပုံ-၁)
ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်မှ ဆက်လက် ခန့်မှန်းပုံဖေါ်ချက်အရ ၄င်းလေဖိအားနည်းဆဲလ်သည် အောက်တိုဘာလ ၃ဝ ရက်နေ့ အစောပိုင်းတွင် စစ်တွေမြို့ အနောက်ဘက်သို့ ရောက်ရှိပြီးနောက် တောင်-အရှေ့တောင်ဘက်မှ အနောက်ဘက်သို့ ချိုးကွေ့ရွေ့လျားကာ အားပျော့ပျောက်ကွယ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။(ပုံ-၂)
(ပုံ-၁) . . . → Read More: ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အနောက်မြောက်ပိုင်းတွင် လေဖိအားနည်းဆဲလ် စတင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်
Leaveacomment Uncategorized ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့မှ လေဖိအားနည်းဆဲလ် 90W ပိုမိုအားကောင်းလာနိုင်
By mmweather.ygn, on October 6th, 2013%
ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့တွင် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့် လေဖိအားနည်းဆဲလ် 90W သည် အောက်တိုဘာလ ၆ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ၁၈း၃ဝ နာရီတွင် ရရှိသည့် GFS ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်မှ ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်များအရ ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့အတွင်းပိုမိုအားကောင်းလာပြီး ယနေ့ည သန်းခေါင်အချိန်တွင် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းအဆင့်သို့ ရောက်ရှိလာနိုင်ပါသည်။ နောက်ဆုံးရရှိသည့် အချက်အလက်များအရ 90W သည် ဘန်ကောက်မြို့ တောင်ဘက် ၂၂၅ မိုင်ခန့်၊ မြန်မာနိုင်ငံ တနင်္သာရီတိုင်း၊ ဘုတ်ပြင်းမြို့ အရှေ့ဘက် ၁၆၅ မိုင်ခန့် ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့အတွင်း၌ တည်ရှိနေပြီး အနောက်-အနောက်တောင်ဘက်သို့ ရွေ့လျားမည်ဟု ခန့်မှန်းရပါသည်။(ပုံ-၁)
အောက်တိုဘာလ ၇ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ၁၅း၃ဝ နာရီတွင် 90W သည် အနောက်-အနောက်တောင်ဘက်သို့ ရွေ့လျားပြီး မလေးကျွန်းဆွယ်အား မြန်မာနိုင်ငံ တောင်ပိုင်းစွန်း ကော့သောင်းမြို့ အထက်ဘက်မှ . . . → Read More: ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့မှ လေဖိအားနည်းဆဲလ် 90W ပိုမိုအားကောင်းလာနိုင်
3 comments Uncategorized « Newer Entries Older Entries »